जापानीहरू किन कम बच्चा जन्माउँछन्?
Home / समाचार / जापानीहरू किन कम बच्चा जन्माउँछन्?
जापानीहरू किन कम बच्चा जन्माउँछन्? 0
बाबुरामको पार्टीको घोषणापत्र : काठमाडौंदेखि सगरमाथाको बेस क्याम्पसम्म केवलकार
अस्थायी कामदारलाई यहाँ ‘फ्रिटर’ भनिन्छ। यो अंग्रेजी शब्द ‘फ्रिल्यान्स’ र जर्मन शब्द ‘आर्बेटर’ (कामदार) को मिश्रण हो। जापानमा सन् १९९० दशकको सुरुदेखि नै ‘फ्रिटर’ संख्या बढ्न थालेको किंगस्टन बताउँछन्।
पछिल्लो समय श्रम बजारको परिवर्तनले पारेको असर यति विकराल बन्दै छ, ठूला सहरका महिला योग्य पुरूषको ‘अभाव’ भएको बताउन थालेका छन्। जोडी मिलाउने कम्पनीहरूको संख्या र व्यवसाय फस्टाएको छ। एक सर्वेक्षणअनुसार १८ देखि ३४ वर्ष उमेर समूहका करिब ७० प्रतिशत अविवाहित पुरूष र ६० प्रतिशत अविवाहित महिला कुनै सम्बन्ध (अफेयर) मा पनि छैनन्।
अहिले पनि महिलाको दाँजोमा पुरुषको आर्थिक तथा समाजिक शक्ति बढी छ। शक्ति बढी भए पनि पुरुष आफैं यति कठिन समयमा गुज्रिरहेका छन्, रोजगारको स्थायित्व कायम गर्न उनीहरूलाई नै मद्दतको खाँचो विज्ञहरूले औंल्याएका छन्।
कतारमा रहने नेपालिलाई खुसीको खबर